ezona meko zokukhaba zibalaseleyo ze-samsung galaxy s8 kunye ne-s8 +
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Eyona meko ilungileyo yokukhaba kwi-Samsung Galaxy S8 kunye ne-S8 +
Eyona meko ilungileyo yokukhaba kwi-Samsung Galaxy S8 kunye ne-S8 +
I-Samsung kunye neapos; s Galaxy S8 kunye neGPS S8 + inezinto ezimbini zokubonisa ezinkulu ezikhoyo kwiifowuni eziphambili ngo-2017, ezilinganisa ii-intshi ezi-5.8 kunye nee-intshi ezi-6.2 ngokwahlukeneyo. Oku, ewe, kuthetha ukuba i-S8 kunye ne-S8 + zilungele ukujonga imithombo yeendaba- kwaye, rhoqo, abasebenzisi baya kufuna ukubukela umxholo ngaphandle kwezandla. Ukunceda kule meko, iimeko ezininzi zokukhusela zibonisa iindawo zokukhaba, nokuba azizizo zonke ezithengiswayo njengee-kickstand.
Ukuba u & apos; sidinga imeko entle yokukhaba kwi-Samsung Galaxy S8 yakho okanye i-Galaxy S8 +, sikhethe ezinye zeemodeli- esicinga ukuba zezona zilungileyo phaya. Ungazifumana zonke zingezantsi, zidweliswe ngokulandelelana koonobumba.
Ityala leMaxboost Wallet
Thenga (ukuqala nge $ 12.99): Galaxy S8 : Galaxy S8 +
Ityala leMaxboost Wallet ye-Samsung Galaxy S8
Ityala leMaxboost Wallet lenziwe ngesikhumba se-PU (aka bicast), kwaye sinokuguqulwa sibe yindawo yokulungiselela ukukhaba ngaphandle kokujonga izandla. Ukongeza koku, awufumani iipokotho ezine zangaphakathi zamakhadi kunye nemali. Ityala leMaxboost Wallet yeyona ndlela inexabiso eliphantsi kolu luhlu, kwaye imele ixabiso elikhulu, iza newaranti yobomi.
Isikrini seSamsung S-Jonga Flip kunye neKickstand
Thenga: Galaxy S8 (ukuqala kwi- $ 35): Galaxy S8 + (ukuqala kwi- $ 25)
I-Samsung S-View Flip Cover yeGalaxy S8
I-S-View Flip Cover kunye neKickstand (ekwabizwa ngokuba yi-Clear View Standing Cover) lelona tyala libiza kakhulu kuluhlu lwethu, kwaye livela kwi-Samsung kunye neapos eyakhe esemthethweni yokufaka izixhobo zeGPS S8. Enkosi ngokubonakalayo kwayo ngaphambili, eli tyala likuvumela ukuba ubone ixesha, kunye nezaziso ngekhava evaliweyo, kwaye ungaphendula nakwiifowuni okanye uvale ii-alamu. Ngokubhekisele kwimowudi yokukhaba, oku kuyahlengahlengiswa, ke kuya kufuneka ufumane ngokulula ikona elungileyo yolonwabo lwakho lokujonga. Abasebenzisi bazo zombini i-S8 kunye ne-S8 + banokufumana i-S-View Flip Cover kwimibala eyahlukeneyo phantse kuzo zonke izinto abazithandayo: mnyama, luhlaza okwesibhakabhaka, igolide, pinki, isilivere, kunye ne-orchid grey.
Isixhobo seSpigen Tough
Thenga (ukuqala nge $ 15.99): Galaxy S8 : Galaxy S8 +
Ityala leSpigen Tough Armor ye-Samsung Galaxy S8
Ukunikezela uyilo oluhle, imeko ye-Spigen Tough Armor ye-Galaxy S8 kunye ne-Galaxy S8 + ihlangabezana nomgangatho womkhosi i-MIL-STD 810G 516.6, kwaye inokusinda kumathontsi ukusuka kuthi ga kwiinyawo ezi-4 (1.2 yeemitha). Ityala linendawo encinci yokukhaba ye-polycarbonate ethi, ngelishwa, ayisiyiyo & apos elungileyo ekunikezeleni ii-angles ezininzi zokubukela, kodwa ubuncinci zona zihlala ixesha elide. Ityala leSpigen Tough Armor liyafumaneka kwimibala eyahlukeneyo enokuxhasa i-Galaxy S8 kunye ne-S8 +, kubandakanya ikorale eluhlaza okwesibhakabhaka, igolide evusayo, igolide yemephu, umpu kunye nomnyama.
Thenga ($ 14.99): Galaxy S8 : Galaxy S8 +
Ityala leVena vCommute leSamsung Samsung S8
Ithengiswe njengee & apos; imeko ye-smart ', iVena vCommute inesikhumba esinjengesikhumba esingasemva, ukongeza ekusebenzeni njengendawo yokujonga iimbonakalo ezininzi zemagnethi, ikuvumela ukuba ugcine amakhadi akho etyala okanye i-ID ngaphakathi. Ngapha koko, eli tyala linokusinda kwi-4 yeenyawo, kwaye liyahambelana nemagnethi yemoto.
Ikhuselo leZizo Bolt
Thenga ($ 17.99): Galaxy S8 : Galaxy S8 +
Ikhuselo leZizo Bolt leSamsung Galaxy S8
Ngokuqinisekileyo ityala elinamandla nelirhabaxa, iZizo Bolt Cover kulindeleke ukuba imelane nethontsi ukusuka kwi-12 yeenyawo (3.6 yeemitha), ke i-Galaxy S8 yakho okanye i-S8 + kufuneka ikhuseleke ngaphakathi kuyo phantse kuyo nayiphi na imeko. Ityala ngokucacileyo linesiphatho esinzima sokukhahlela, nangona oku kungangqinelani kakuhle. Ungayifumana iZizo Bolt Cover ngaphandle kweenguqulelo ezinemibala engaphantsi kweshumi- ikliphu ye holster, iklip yebhanti, kunye nomsila wenkomo zibandakanyiwe zonke ezo zinto.
I-s10e vs s10 ubomi bebhetri
selenium fumana into ngohlobo
I-iPhone 11 kunye ne-iPhone 11 Pro iza ngemibala emininzi-khetha izinto ozithandayo apha
Ngaphezulu kwe- $ 2,000 yomvuzo womntu wokuqala ukulawula ukuvula i-bootloader ye-AT & T kunye neVerizon eyahlukileyo ye-LG G4
I-SanDisk flash drive isebenzisa ifowuni yakho ye-Android okanye ithebhulethi kunye neapos; ye-USB-port yokuhambisa iifayile
Umgca weGPS S21 yeyona nxalenye yeyona Samsung Pay
I-Motorola DROID Turbo 2 kunye ne-DROID Maxx 2 yokuthelekisa ubungakanani ngokuchasene neembangi: ingaba inkulu kangakanani ngokwaneleyo?
Uyisebenzisa kanjani iGPS S20 kunye neNqaku lama-20 eliKhawulezayo lokwabelana ngesantya sokudlulisa iifayile
Ezona ndlela zilungileyo zokuzilolonga onokuzithenga ngo-2021
Isamsung ineempendulo zabasebenzisi be-Android abazithumela kubazondi beeblue
Jonga le nto inkulu kumatyala ebhetri eApple ngaphambi kokuba iphelelwe